Bakalorea Sainte Famille Mahamasina Mpiadina iray no tojo tsy fahasalamana, 34 no tsy tonga
Nahatratra 34 isa ireo mpiadina tsy tonga niatrika ny fanadinana Bakalôrea omaly tetsy amin’ny foibem-panadinana Sainte Famille Mahamasina ka ireo nisafidy ny sokajy A2 no betsaka indrindra tamin’ireo izay nahatratra 24 isa.
Mpiadina iray ihany koa no tojo tsy fahasalamana tampoka omaly maraina noho ny “stress” sy ny tsy fisakafoanana maraina saingy rehefa noraisin’ny infirmiera dia afaka niverina soa aman-tsara niatrika ny laza adina filôzôfia ihany, izay nisantaran’ireo mpiadina manerana ny Nosy ny fanadinana. Tsy nisy kosa ireo nanadino ny taratasy fiantsoana sy ny mombamomba azy ary nanomboka tamin’ny 07 ora sy sasany katroka ny fanadinana raha araka ny fanazavan-dRakotonirina Toky, lehiben’ny foibem-panadinana ao an-toerana. Nomarihiny manokana fa ho an’ireo mpiadina tsy tonga omaly maraina dia efa naman’ny tsy afaka izy satria efa aotra ny naotin’ny taranja filôzôfiany. Miisa 980 moa ireo mpiadina voasoratra anarana hiatrika ny fanadinana Bakalôrea ao amin’ity foibem-panadinana iray ity, miparitaka amina efitranom-panadinana 35 isa. Roa isaky ny efitrano ny mpiambina izay marihina fa tonga avokoa. Ny taranja matematika sy Malagasy no hatrehin’ireo mpiadina anio talata raha ny fizika sy ny histo-géo kosa rahampitso a0larobia. Miisa 174.750 ireo kandida voasorattra anarana niatrika ny fanadinana Bakalôrea tamin’ity taona ity. Ny 111.957 no nisafidy ny sokajy(A2), ny 35.606 ny sokajy (D), ny 13.200 ny sokajy (A1) ary ny 4.290 no nisafidy ny sokajy C. Miisa 9.698 ireo miatrika ny baka teknika ka 88 taona no zokiny indrindra raha 11 taona no zandriny indrindra.